Mitandrema amin'ny mpanangom-bokatra, karazan-tserasera vaovao - Semalt Expert
Ny botnets dia nametraka fitaovana maherin'ny iray tapitrisa ho an'ny ordinatera sy finday, ary mbola mitombo isa izy ireo. Ireo mpandalina ny fiarovana dia namoaka ny fampitandremana matotra momba ny botnet vaovao fantatra amin'ny hoe Reaper. Voalaza fa ny rivo-doza cyber no manimba ny serivisy amin'ny aterineto sy fitaovana maro samihafa eran-tany. Ny tena ratsy indrindra dia ity dia azo alaina ao amin'ny solosainao manokana tsy misy fahalalana. Manazava i Jack Miller, Semalt Mpitarika Success Manager ao amin'ny Semalt fa afaka miditra na dia fitaovana toy ny routers, smartphones ary ny hafa aza izy ary tena mampidi-doza.
Inona ny botnet?
Ny botnet dia rakitra goavam-be iray amin'ny aterineto, fitaovana mahatsikaiky izay voafehin'ny solosaina foibe. Amin'ny ankapobeny dia tsara raha tsy mametraka computers maro, router, tablette, ary smartphones, ary mamorona fitaovana vaovao marobe amin'ny malware sy viriosy. Ny iray amin'ireo faritra mamohehatra indrindra dia ny tsy fantatry ny mpampiasa fa ny bala afindrany amin'ny botnets, satria mitrandraka mangingina ny fampiasana tsy fahita firy.
Ny botnets dia ampiasaina ihany koa mba hampidina sy hikorontana sasantsasany amin'ny serivisy an-tserasera, toy ny DDOS (Distributed Denial of Services). Manolotra fanentanana marobe momba ny spam ihany koa izy ireo. (nitranga in-1): Ny tena mahavariana dia ny mamorona botnets sy mivarotra azy amin'ny mpividy izay mampiasa azy ireo hanatanteraka cyber-crimes manerana izao tontolo izao
Volana vitsy lasa izay, ny botanin'i Mirai dia nahatonga fanakorontanana goavana tany Etazonia sy ireo router maro be. Izany dia nanararaotra ny fahalemena sasany teo amin'ny sehatry ny fandriam-pahalemana amin'ny fitaovana, ary ny mety ho vulnerable dia ny Reaper.
Inona ilay mpamosavy?
Ny mpijinja dia afaka mandamina mora foana ny lalana mankany amin'ny ordinatera sy ny fitaovana finday ary mampitahotra kokoa noho ny taloha. Ny mpandalina ny fiarovana dia nitarika ny olom-bahoaka tamin'ny olana, satria tiany ho fantatry ny rehetra ny momba ny botnet izay misy router maro be maneran-tany.
Nitombo ny ezaka nataon'ilay ekipa mba hampidirana ny fiarovana ny ITS Io, ary ny ambaratongam-pandrefesana toy izany dia nanjary tsapa tao anatin'ny fotoana fohy. Mihoatra ny roa tapitrisa fikambanana no mitaraina noho ny fitaovana voan'ny aretina any Aostralia sy Etazonia. Ny ekipan'ny mpikaroka dia nanolo-kevitra fa ho avy ny rivomahery cyber manaraka.
Ahoana no hampijanonana ny Mpanjifa amin'ny fanafody ny fitaovana?
Hatramin'izao, ny aretina rehetra mifandraika amin'ny Reaper dia voafetra eo amin'ny router sy ny fakantsary mifototra amin'ny aterineto. Na dia izany aza dia tokony hametraka programa fanoherana malware ianao ao amin'ny ordinateranao na ny fitaovana finday mba hiarovana ny fitaovana avy amin'izany. Mac sy PCs dia mora manimba ny karazana malware, noho izany dia tokony manandrana ny BitDefender. Ny mpampiasa Android sy tablety dia afaka manakana ny fitaovana ampiasainy hametrahana rindrambaiko mety Source .